Tohizo ny miantso ireo fo | Fondation des Choisis de Jésus
Tohizo ny miantso ireo fo
1C_13: Anaka, fifaliana vaovao ho Ahy mandrakariva rehefa miantso Ahy ianao. Tiako ny mahita anao mihaino Ahy. Tohizo ny mivavaka amin’ny Ray iarahanao Amiko sy ny Reniko Masina, mba hisokafan’ireo fo sy hatonga an’ireo fo hiaino Ahy. Ny Famindram-po sy ny famelan-keloka dia eo foana, ary miandry atolotra ho an’ireo izay miaiky ny fahotany. Tohizo ny miantso ireo fo ao antin’ny tontolo tsy hita maso mba hisokafany amin’ny Famindram-po lehiben’ny Ray.